Soo-saareyaasha Qalabka Dabka - Shiinaha Qalabka Qalabka Dabka & Warshad
Waxaan inta badan soo saarnaa oo aan dhoofinaa qoryaha alwaaxda gubanaya, shooladaha birta, cookware bir ah, BBQ, bambooyin bir ah iwm Waxaan bixin karnaa adeegga OEM, waxaan ku xafideynaa sirta naqshadeynta macaamiisha iyo sirta ganacsiga si adag. Waxaan leenahay wax soo saar qaan-gaar ah iyo khibrad adeeg. Macdanteena waxaa la aasaasay 2001, waxay bilowday inay soo saarto qaabka England loo shubay birta birta iwm waqtigaas, sababtoo ah xakamaynta tayada adag, alaabtayada waa goo .. .
Shaashadda, nooc ka mid ah alaabta guryaha ee dhismaha Shiinaha ee gudaha ay adeegsadaan si ay u joojiyaan dabaysha, waxa loogu yeero "sidoo kale dabaysha dabaysheeda". Maaddaama ay tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah qalabka guryaha, shaashaddu waxay leedahay taariikh dheer. Shaashadda muuqaalka guud ee muuqaalka qolka, ka ciyaar doorka kala-goynta, qurxinta, dabaysha, isuduwidda. Waxay ka tarjumaysaa midba midka kale alaabta caadiga ah, waxay soo saartaa midka ugu fiican midba midka kale, waxay noqotaa mid isku dhafan oo qurxinta guryaha Shiinaha ah, oo la joogo ...
Magaca macluumaadka: Qalabka dabka Midabka: Boodhka madow Badeecada waxay ka kooban tahay aalado / mandrel Dabka, oo ay ka mid yihiin qabatooyin, xaaqitaano, xatooyo, tongs iyo taageerooyin. Hoolka dabka ayaa loo isticmaali karaa in lagu shido dabka, Xaaqda dabka ayaa loo isticmaali karaa in lagu nadiifiyo dabka, Maqaamadda dabka ayaa loo isticmaali karaa in lagu fidiyo ash ash alwaaxda dabka, Qalabka dabka lagu shido ayaa loo isticmaali karaa in lagu qaado alwaax. Meel ku ag dhig dabka, qurxin kara dabka, isticmaal habboon, qurux badan oo fudud. Hebei Womho Imp. & Exp. Ganacsiga Co., Ltd. wuxuu diiradda saarayaa ...